Nodimandry I Roberto Beličanec, Masedoniana Iray Manampahaizana Manokana Amin’ny Serasera, Mafana Fo Sady Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2013 1:27 GMT
Namoy ny ainy tamin'ny fijanonan'ny fony tampoka [mk] ny 29 Jona 2013 teo amin'ny faha 41 taonany i Roberto Beličanec, Masedoniana manampahaizana manokana amin'ny serasera, mafana fo sady bilaogera.
Beličanec dia iray tamin'ireo olona vitsy niteny imasom-bahoaka momba ny fahalalahana sy ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny, sahy nilaza ny marina tamin'ny Mpitondra [mk]. Nanana mpanara-dia maro izy tao amin'ny filazam-baovao sosialy noho ny fahasahiany hanohitra ny fanararaotam-pahefan'ny mpitondra, ny kolikoly, ny sivana ary ny lahateny manevateva feno fankahalàna (izay sokajiany ho “herisetra am-bava”), amin'ny fanambàrany ny fahaizany anaty hanihany sy hatsaram-panahy.
Taorian'ny asa fanaovan-gazety tsara dia tsara nataony, anatin'izany ny niasàny tao amin'ny Fokus weekly ny taona 1990, nanao ny asan'ny manam-pahaizana manokana amin'ny serasera i Beličanec ary nandray anjara tamin'ny dingana niarahana neken'ny be sy ny maro tamin'ny fandàniana ilay Lalàna Ho an'ny Haino Aman-jery ny taona 2005. Amin'ny maha mafana fo azy, isan'ireo mpanorina ny Citizens for European Macedonia ( Mponina Ho an'i Masedonia Eoropeana) izy.
“Tsy vahaolana ny Fahanginana” – Roberto Beličanec, 1972-2013. sary nozaraina ho fahatsiarovana.
Nandritra izay volana maro lasa izay, amin'ny maha filohan'ny Media Development Center (ivontoerana ho fampandrosoana ny Filazambaovao) azy, tafiditra tanaty ady goavana [mk] i Beličane , ady amin'ilay Lalànan'ny filazam-baovao vaovao manao ho anaty kitapo iray ny media rehetra, izay natao hamatsy fomba ara-dalàna ahazoana ny mifehy tanteraka ny fahafahana maneho hevitra ao Masedonia. Ny fandraisana anjara nataony farany amin'ny maha manam-pahaizana manokana azy dia ilay famakafakana lalina io volavolan-dalàna io (pdf).
Ho fanehoan-kevitra amin'io lalàna vakiraoka io, vao haingana no novain'i Beličanec ny bilaoginy hoe ” Tsy Amerika aty” hiala amin'ny maha-sehatra nasionaly ary hankany ivelany. Nanameloka fitsarana iray izay mahakasika herisetra efa raiki-tampisaka fankahalàna olona ny lahatsoratra tanaty blaogy farany nalefany [mk], fanafihana tamin'ny andro alina tranonà fianakaviana mpisehatra iray sady mafana fo amin'ny Fiarovana ny Zon'olmbelona, Petar Stojkovikj, izay naneho ampahibe maso ny maha-” homosexuel” azy, izay nampifandray ilay raharaha tamin'ilay Nazi pogroms ny taona 1930. Tao amin'ny lahatsoratra farany nakariny tao amin'ny Facebook[mk], raha nitodika tamin'ilay propagandy natao handemena ny fahitàna ny fiatan'ny fidiran'i Masedonia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy, dia nametra-panontaniana hoe:
Ary ankehitriny inona ? ahoana? Mbola handany fito taona ihany ve isika ao anaty toekarena voodoo sy politika voodoo ?
Ireo blaogera mpiara-miasa aminy [mk, mk], ireo mpanao gazety ary ireo mpampiasa filazam-baovao sosialy dia nampakatra fahatsiarovana ho an'i Beličanec, ary nizara ihany koa ny rohy sy ny oha-pitenenany tao amin'ny Facebook, ary naneho ny hatezeran'izy ireo tamin'ireo (nofafana malaky) fanehoan-kevitra feno hafaliana[mk]. Ny oha-pitenenana isan'ny zaraina matetika ao dia ahitàna ampahany kely [mk] avy amin'ilay tafatafa natao niaraka tamin'ilay vohikala iray ao amin'ny tanàna niaviany ao Prilep :
…Misy fifandirana hatrany ny fifandraisako tamin'ireo andrim-panjakana rehetra – tokony hajaina izy ireny, nefa koa hiova mba hanompo ny vahoaka, fa tsy hoe ny vahoaka indray no hanompo ny andrim-panjakana. Izany no antsoiko hoe fiainana malalaka sy tsy niova izany. Tsy zakako ny [pashas] na izay mety ho rafitra mpanjaka masi-mandidy hafa. Tsy manana fahatahorana ny fitondrana aho, eny fa na ireo hery mpisetrasetra aza. Tsy mino ny [ohabolana mitory faharesena] hoe “tsy tapaky ny sabatra ny loha mihondrika” aho- mifanohitra amin'izany, ny loha toa izany no mora tapahana indrindra, mampidina ny tànany fotsiny sisa no ilain'ilay mpanapa-doha. Tsy mino aho hoe afaka ny hamorona ny tonga lafatra ny olombelona. Mila miova mandrapahafatintsika isika mba hivelona sy hiroborobo. Tsy tadidiko hoe mpanohitra izany aho fony teny amin'ny Oniversite – Angamba mety ho izany… Kanefa tsy mpanohitra tsy amin'antony izany aho. Misy tanjona sy fototra hatrany ny fanoherako. Tsy fanehoana fanoherana be fahatany ataonà lehilahy iray tsy mahafantatra akory ny antony mahatezitra azy izany… Oh, tsia! fantatro tsara hoe iza sy maninona no mampahatezitra ahy. Ary tsy mampiaka-peo noho ny amiko sy ny amin'ny tanjoko manokana fotsiny aho, matetika dia tantara lehibe mifandraika amin'ny tantaran'ny fahalalahana izany. Tsy ny fahalalahako ho ahy irery ihany, fa koa ny an'ny hafa. Ny Fahalalahana dia fototry ny fahatanterahana eo amin'ny olombelona tsirairay. Heveriko fa tsy hanavotra antsika ny fiforetana [amin'ny famoretana]…
Mamorona andevo ny fandeferana [famoretana]. Ireny toerana raisiko ireny dia ahafahako mahazo lentam-pahafahana manokana – koa dia tsy misy olona hibaiko ahy, tsy misy hitarika ahy na hanararaotra ahy. Ankehitriny aho dia afaka misaina, miteny, miasa ary mijery fitaratra am-pilaminana, amin'ny fahafantarako fa tsy misy olona ho avy handodona eo am-baravarako hitaky trosa amiko amin'ny zavatra tsy tiako atao. Ary tsy zavatra kely izany amiko !
Roberto Beličanec dia namela mananontena iray ary zaza telo.